Home Wararka Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga oo lagala baxay Hotel uu ka deganaa magaalada...
Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga oo lagala baxay Hotel uu ka deganaa magaalada Baydhaba
Wararka laga helayo magaalada Baydhaba ayaa heegaya in cidiimo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay caawa muddo saacado ah xireen wasiirkii Wasiirkii Hore ee Gashaandhigga Cabdirashiid Cabullahi Maxamed oo ahaa musharax xildhibaan.
Musharaxa ayaa deganaa Hotelka Horyaal, halkaasoo ugu tageen ciidamo gaara oo kaxeystay, iyadoo aan la ogeyn halka ay la aadeen. Saacado kadib ayaa la sii daayey wasiirka hore, dibna loogu celiyay xoriyadiisa.
Wasiirkii Hore ee Gashaandhigga Cabdirashiid Cabullahi Maxamed ayaa la sheegay inuu saaka tegay magaalada Baydhaba, isgoo rajo ka qaba inuu u tartamo Kursiga HOP187.
Wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka uu hoggaamiyo C/casiis Lafta-gareen, isagoo sidoo kale qaraabo la ah wadaadka u xiran madaxda Dowladda Federaalka ee Mukhtaar Roobow.
Previous articleGuudlaawe oo soo diiday qorshe ay Jowhar u tageen xubno wakiil ka ah Fahad
Next articleDadaalkii ugu danbeeyay ee badbaadinta 5 Sano jirka Ceel ku dhacay Dalka Marooko oo socda
Al Shabaab oo weerar khasaare ka dhashay ku qaaday deegaanka Camaara
Wasiirka Gaashiga DFS oo amray in baarintaan lagu sameeyo dhul boobka...